Danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya oo Galabta soo gaaray Garowe – Radio Daljir
Juunyo 8, 2015 10:35 b 0
Isniin, Juun 08, 2015 (Daljir) — Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu 08-06-2015 aqalka madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe ku qaabilay wefdi uu hogaaminayey Safiirka Midowga Yurub Soomaaliya u fadhiya Danjire Michele Cervone d’Urso.
Markuu uu soo dhamaaday Kullan gaar ah oo ay wada qaateen Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Danjire Michele Cervone d’Urso ayey si wadajir ah ula hadleen Warbaahinta, waxana ay sharaxaad dheer ka bixiyeen qodobadii ugu muhiim sanaa oo ay kawada hadleen.
\_’\_’Waxyaabo badan ayaanu kawada hadalnay oo ay kamid tahay Xiriirka Puntland iyo EU, Mashaariicda Horumarineed ee ay midowga yurub Kawadaan Puntland iyo Shaqooyin badan oo EU la qabanyso Dawladda Puntland\_’\_’Ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
Midowga yurub oo Puntland ka taageera dhinacyada waxbarashada , kaabayaasha dhaqaalaha , maalgelinta wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Garoowe, taageerada shirka wada tashiga Puntland ee dhawaan lagu wado in uu qabsoomo , arrimaah oo idil ayey kawada hadleen dardar gelintooda.
Doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya ayey dhinaca kale si wada jir ah uga wada hadleen Madaxweynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Safiirka Midowga Yurub Soomaaliya u fadhiya Danjire Michele Cervone d’Urso.
\_’\_’ Waxaan arjaynaynaa in midowga yurub barnaamijyada dhaqaale ee ay Puntland kawadaan lasii ambaqaado lana dadajiyo , lana horumariyo \_’\_’ Ayuu hadalkiisa raaciyey Madaxweyne Dr.Cabdiweli Gaas.
Danjire Michele Cervone d’Urso ayaa dhankiisa dawladda Puntland ku amaanay dadaalka horumarineed ee ka soconaya gudaha Puntlan iyo guulaha waaweyn ee laga gaaray kooxaha xagjirka ah ee Al-shabaab, kullankuna waxaa uu ku soo dhammaaday guul iyo is afgarad.